Apple inogona kunge ichishanda pawebhu kupinda kuburikidza neApple ID | IPhone nhau
Apple inogona kunge ichishanda pawebhu kupinda kuburikidza neApple ID
Iyo nyowani iOS yekuvandudza inosvika inotevera gore. Zvichakadaro, mabhatas anoenderera mberi kusvika kune vanogadzira uye basa rinoramba richichinjisa zvese zvinoshandiswa nekukurumidza sezvazvinogona. Kunyangwe kuvandudzwa kukuru kusingatarisirwe, zvirinani padanho remabasa matsva kana kutaridzika, zvinoita sekunge Apple yanga ichishanda chinyararire munzira nyowani kukwanisa kunyoresa kune echitatu-bato mawebhusaiti nekuda kweApple ID yedu.
Kushanda pane kodhi iOS 11.3 —Ichi ndicho chinotevera kuvandudzwa kwepuratifomu yefoni yeApple neIpad—, mugadziri anozivikanwa Guilherme Rambo uyo anoshandira kutsikisa 9to5mac, yawana sevhisi nyowani inonzi SecureChannel. Izvi zvaizo - kana zvirinani kubvumira - vashandisi ku tsvaga mamwe mawebhusaiti nekungopa yako Apple ID.
Kufamba uku hakusi kutsva. Uyezve, iwe wawana iyo kesi iyo zvinopfuura imwechete internet-based service inokutendera kuti usarudze chero maakaunzi ako (Google, Twitter kana Facebook) kana kugona kunyoresa uchipa data rako rese.. Kuti ndikupe muenzaniso, muverengi weRSS Feedly muenzaniso wakajeka weizvo zvatinokuudza. Sezvo iwe uchigona kufungidzira, iyo sarudzo yekungobvumidza vechitatu mapato kuti vawane dhata rakatochengetwa mune mamwe maakaunzi inoshandisa zvakanyanya kukurumidza.
Zvino, kunyangwe kufungira kuri izvo Apple yaizongobvumidza mukana wezita chairo uye kero yeemail, kuchine kusahadzika kwakasimwa kuti kuchave nekuwana kune rumwe ruzivo rwakavanzika. Bheji redu harisi uye zvakanyanya kudaro nenguva dzazvino uko kuvanzika kwevashandisi kuri mumutsara wekutanga wemoto.
Chekupedzisira, Guilherme Rambo anoratidza kuti ichokwadi zvakare kuti kubva kuApple TV chirongwa chechokwadi chinoshandiswa mumashandisirwo akati wandei eTV pasi peakaundi imwe kana Login. Munoona sei kufamba uku? Zvinonakidza here kuti iwe ugone kuwana yechitatu-bato mawebhusaiti nekupa yako Apple ID?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inogona kunge ichishanda pawebhu kupinda kuburikidza neApple ID
Apple inotanga kutengesa iyo iPhone 7 uye 7 Plus muchikamu chayo chakadzorerwa
27.000 mAh uye dhizaini yakanyatso chenjera. Iri ndiro Power Bank Xtorm risingaperi ne USB C